Xulka cayaaraha | Radio Himilo | Page 10
Home / Xulka cayaaraha (page 10)
Pep Guardiola oo doonaya saxiixa Inigo Martinez.
radio himilo November 27, 2017	Xulka cayaaraha Leave a comment 37 Views
Muqdisho – Tababaraha kooxda Manchester City Pep Guardiola ayaa u jeesan doona u dhaqaaqista daafaca kooxda Real Sociedad Inigo Martinez ka hor inta uusan suuqa kala iibsiga furmin bisha Janaayo, siada ay sheegtay The Sun. Tababarihii hore ee Barcelona ayaa ...
Barcelona oo bisha Janaayo u dhaqaaqeysa soo xera galinta Christian Eriksen
radio himilo November 27, 2017	Xulka cayaaraha Leave a comment 33 Views
Muqdisho – Barcelona ayaa diyaar u ah inay bisha Janaayo u dhaqaaqdo ciyaaryahanka khadka dhexe ee kooxda Tottenham Christian Eriksen, sida laga soo xigtay Don Balon. Inkastoo lala xariirinayey laacibiinta kooxaha Arsenal iyo liverpool ee Mesut Ozil iyo Philippe Coutinho, ...
Cristiano Ronaldo oo doonaya wada-hadal uu la furo PSG.
radio himilo November 25, 2017	Xulka cayaaraha Leave a comment 63 Views
Muqdisho – Cristiano Ronaldo ayaa u sheegay wakiilkiisa Jorge Mendes inuu wadahadal la furo Paris Saint-Germain, sida laga soo xigtay diarioGol. Xiddiga reer Portugal ayaa lagu soo waramayaa inuu doonayo inuu mushaar kordhin ku helo Real Madrid, haddii uu waayana ...
Messi oo kordhiyey heshiiska uu ku joogo Barcelona.
radio himilo November 25, 2017	Xulka cayaaraha Leave a comment 180 Views
Muqdisho – Barcelona ayaa xaqiijisay in Lionel Messi uu saxiixay qandaraas cusub oo uu ku sii joogi doono Camp Nou ilaa 2021. Qandaraaska xiddiga reer Argentina ayaa la filayey inuu dhaco xagaaga soo aadan, iyada oo warar soo baxayay ay ...
Harry Kane oo danaya in uu ciyaaro mid kasta oo kamid ah kulamda xilli ciyaareedkan.
radio himilo November 25, 2017	Xulka cayaaraha Leave a comment 38 Views
Muqdisho – Weeraryahanka Harry Kane ayaa shaaca ka qaaday inuu doonayo inuu ciyaaro kulan kasta xilli ciyaareedkan, ita laga gaarayo Koobka Adduunka ee xagaaga soo aadan ka dhici doona Russia. Kane ayuu dhaawac ka soo gaaray kulankii North London derby ...
radio himilo November 21, 2017	Xulka cayaaraha Leave a comment 59 Views
Muqdisho – Henrikh Mkhitaryan ayaa u dagaalamaya inuu badbaadiyo mustaqbalkiisa Manchester United, ka dib markii uu qaab ciyaareed aan wanaagsaneyn uu soo ban-dhigay isbuucyadii u danbeysay, sida ay qortay The Sun. Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Armenia ayaa ku riyaaqay ...
radio himilo November 21, 2017	Xulka cayaaraha Leave a comment 53 Views
Muqdisho – Real Madrid ayaa diyaar u ah inay 30 milyan oo ginni kula soo wareegto weeraryahanka kooxda Arsenal, Alexis Sanchez bisha Janaayo, sida laga soo xigtay Don Balon. Chilean-kan ayaa qandaraaskiisu dhacayaa marka uu dhamaado sanadkan, iyada oo aysan ...
radio himilo November 21, 2017	Xulka cayaaraha Leave a comment 56 Views
Muqdisho – Xiddiga kooxda Barcelona ee weerarka ugu ciyaara xulka Faransiiska ayaa ku tababbartay Ciutat Esportiva Joan Gamper si uu u bilaabo isbuuca isla markaana uu usii joogteeyo kasoo kabsashada dhaawicii muruqa ahaa ee soo gaaray bishii September. Tababarkii Isniinta ...
radio himilo November 20, 2017	Xulka cayaaraha Leave a comment 58 Views
Muqdisho – Tababaraha kooxda Tottenham, Mauricio Pochettino ayaa doonaya in uu lasoo saxiixdo daafaca dambeedka bidix ee naadiga Manchester United, Luke Shaw bisha Janaayo, sida laga soo xigtay wargeyska Irish Independent. Pochettino ayaa Shaw kula soo shaqeyey Southampton ka hor ...
Daniel Sturridge oo doonaya inuu ka baxo albaabka Anfield bisha Janaayo.
radio himilo November 20, 2017	Xulka cayaaraha Leave a comment 39 Views
Muqdisho – Weeraryahanka kooxda Liverpool, Daniel Sturridge ayaa doonaya inuu ka tago kooxda Liverpool bisha January, sida ay qortay Daily Mirror. 28 jirkan ayaa ku soo bilowday kaliya afar kulan isaga oo ka hoos ciyaaraya Jurgen Klopp xilli ciyaareedkan, waxaana ...